Sintomy ny Maps.Me Pro maimaim-poana | Androidsis
Manohy ny fizarana amin'ny fampiharana mahavariana ho an'ny android de Androidsis, fizarana noforonina hanoroana hevitra anao ny rindranasa tsara indrindra ho an'ny terminal Android, izay ifanarahan'izy ireo "Crème de crème" Fampiharana Android.
Raha ny tranga misy eto amintsika anio, dia te-hanome sosokevitra fisoratana anarana iray izay efa fotoana fohy lasa izay no nisy fangatahana naloa, saingy hatramin'ny 3 desambra 2014 dia azontsika atao ny mahazo azy io maimaim-poana sy ara-dalàna tanteraka, amin'ny alàlan'ny Play Store ihany. Google. Fantatrao tokoa ny anarany, Sarintany.ME Pro.
Inona no atolotry ny Maps.Me Pro ho antsika?
Ny tena fampiasa asongadiny Maps.Me Pro izay lasa fampiharana maimaimpoana tanteraka ao amin'ny Google Play Store, anao io Fampiasana feno amin'ny maody ivelan'ny seranana. Izany hoe, Maps.Me Pro dia fampiharana Maps feno, safidy voajanahary amin'ny Google Maps, izay hanome ny serivisy tsy mila fifandraisana Internet miasa.
Tena zava-dehibe izany indrindra ho an'ireo mpampiasa mandehandeha nanomboka teo tsy mila fifandraisana data izy ireo amin'ny alàlan'ny roaming Mba hahafahanao mivezivezy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, misintona fotsiny ny sarintanin'ilay firenena hotsidihinay, fampidinana maimaimpoana tsy misy fepetra ihany ny fifandraisana mavitrika amin'ny GPS ara-nofo avy amin'ny Smartphone Android na Tablet anay.
Anisan'ireo endrika vaovaony na fampiasa vaovao hanasongadinana azy, tsara ny manonona azy ny fahatsoran'ny fampiharana ary ny fampidirana vaovao amin'ny fahafahany mivezivezy amin'ny Maps.Me Pro manomboka amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa mampiasa azy serivisy famoronana làlana vaovao. Serivisy vaovao izay hitarika antsika amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny alàlan'ny fivezivezena GPS ary manondro ny fihetsika tokony hatao, na dia eo aza ny fatiantoka lehibe, farafaharatsiny farafahakeliny, fa tsy manana fitetezana am-peo.
Ilaina ihany koa ny manonona izany ny mety hikarohana teboka mahaliana ny mpizahatany ao anaty tahiry lehibe izay havaozina tsy tapaka, ary koa ny mety hanampiana ireo toerana tianay ho marika ho fidirana haingana avy amin'ny efijery lehibe amin'ny sari-tany.
Ity safidy bookmarking ity dia misy koa ny mifanentana amin'ny fanafarana ireo toerana tiantsika manokana noforonina niaraka tamin'ny fampiharana sarintany hafa, raha mbola ao anaty KML o KMZ.
Tsy isalasalana fa fampiharana tena mahaliana ho an'ireo mpampiasa rehetra izay matetika mivezivezy be any ivelan'ny faritry ny firenentsika, na na iza na iza manana fifandraisana data voafetra.
Ampidiro ny fampiharana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fampiharana mahavariana ho an'ny Android; Androany, Maps.Me Pro maimaimpoana ao amin'ny Play Store